कतार जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम « Lokpath
कतार जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम
काठमाडौँ- के तपाई कतार जाँदै हुनुहुन्छ ?
अब कतार प्रवेश गर्ने हरेक यात्रुले नेपालमा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट जारी भएको ७२ घण्टाभित्रको कोभिड १९ नेगेटिभ पिसीआर रिपोर्ट लिएर मात्र यात्रा गर्न पाइने भएको छ। यस्तै कतार प्रवेश गर्ने नेपालीले खोपको मात्रा पुरा गरेको १४ दिनपछि प्रवेश गरेमा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने भएको छ।
खोप लगाएका व्यक्तिको साथमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । प्रमाणपत्रमा खोप लगाइएको मिति, खोपको नाम/प्रकार, उपलब्ध भएमा खोपको लट नम्बर खोप लगाउने निकायको छाप हुनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । सिनोर्फम खोप लगाएका व्यक्तिले भने उनीहरुको एण्टिबडी परीक्षण गरिने छ । यदि पोजिटिभ देखिएमा क्वारेन्टिन बस्नुनपर्ने तथा नेगेटिभ देखिएमा होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएको छ।
खोपको मात्रा पुरा नगरेका, खोपको मात्रा लगाएको १४ दिन पुरा नभएको वा खोप नलगाएका यात्रुले भने अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यात्रा गर्नुभन्दा कम्तीमा १२ घण्टाअघि www.ehteraz.gov.qa वेबसाइटमा अनलाइन माध्यमबाट प्रि रजिस्ट्रेशन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि प्राप्त हुने ट्राभल परमिट प्रिन्ट गरी साथमा लिएर यात्रा गर्नुपर्नेछ।
दूतावासका अनुसार कतारले फाइजर, वायोटेक, मोर्डेना, अष्ट्राजेनिका (कोभिशिल्ड/अक्सफोर्ड) र जान्सेन (जोन्सन एण्ड जोन्सन)को खोपलाई मात्र मान्यता दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,१०,आईतवार १३:३७